नेपाली चेलि डा. सालीन्द्रा थापा मगरले थाङगुक विश्वविद्यालय कोरिया बाट पि एच डी गर्न सफल – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /News/नेपाली चेलि डा. सालीन्द्रा थापा मगरले थाङगुक विश्वविद्यालय कोरिया बाट पि एच डी गर्न सफल
नेपाली महिलाहरु नेपाली सेनामा बि.सं. २०१८ सालमा नर्सिङ्ग सेवा हुँदै प्रवेश गरेका थिए। २०२२ सालमा प्यारा फोल्डरमा र २०२६ सालमा महिला चिकित्सकमा भर्ना लिई नेपाल सेनाभित्र क्रमिक रुपमा प्राविधिक सेवा र २०६१ सालबाट साधारणतर्फ समेत महिला भर्ना खुल्ला गरिएको थियो। अहिले महिलाको संख्या बढ्दै गएको छ ।भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्